Adeegsiga hababka cilmiga ku dhisan ayey laamahani kaga duwanaadeen kuwa kale ee ku saabsan dadka. Waxa maadooyinkan ka mid ah: dhaqaalaha , culuunta siyaasadda, iyo dembi-baaristaiyo Cilminafsi. La mid maaha cilmiga loo yaqaan social science ee aan hore uga soo faalloonnay; hase ahaatee, waa mid madax bannaan. Inbadan oo ah dadka cilmigan bartaa kuna xeel dheeraadaa way ku fashilmeen in dhab ahaantii ay sidii la rabay u qeexaan amaba ay u soo bandhigaan, waxa se ay ku soo ururiyaan: waa barashada bulshada, yadoo loo dhabbe galayo is-dhexgalka bulshada iyo hannaanka ay bulsho gaar ahi u noolaato oo la barto.
Sida lagu male weyn yahay, Ibnu Khaldun waa aabihii cilmigan loo yaqaan sociology. Sidoo kale waxa uu ahaa aabihii dhaqaalaha sida aan hore u soo tibaaxnay. Haddaba, Ibnu Khaldun oo dhintay muddo hore oo noolaa qarnigii 14aad ee Miilaadiga. Sida ku xusan buug aanu helnay oo laga qoray Ibnu Khadun iyo Aragtiyadiisii uu soo kordhiyay. Waxa la daabacay , Austin, Texas, boggaga uu ka kooban yahay waa bog. Guud ahaan buuggaas waxa ku qoran waxa ka mid ah: malaha iyo hubaasha Cilmiga Usuulu Fiqigu waxa uu u yaqaannaa Yaqiin iyo Danni , diinta iyo sababaynta, Islaamka iyo sida uu wax u sababeeyo, cilmiga suurtagalnimada ee logic loo yaqaan iyo Aristotle, Ibnu Khadun muxuu logic ka qabay, iwm.
Ninkan Ibnu Khaldun loo yaqaan buuggiisa ugu caansan ee waxa loo yaqaan Muqaddimah ama Prolegomena. Waana buugga cilmiga ugu badan ee sociology ga laga bartay. Ibnu Khaldun wuxuu ku soo koobay cilmigan: Bulshadu waa noole dharaaraha uu adduunka joogo la kulma dhalasho, koritaan, qaan-gaadh, gabaw iyo dhimasho yadoo ay ugu wacantahay sida ay sunnada Rabi ku dureersantay. Sida aan ka soo gaadhnay odayga gadh-caddaaga ah, Soomaalidu waxay tilmaamaan in kolka hore uu caruur yahay, kadibna darandar, ka dib na dhallaan.
Labka Soomaalidu waxay ku magacaabaan gaban; dheddigana dhoocil. Waxa xiga kuray iyo foodlay oo dumarka lagu tiraabo. Intaas ka dib inanku waa barbaar halka gabadhana gashaanti loogu yeedho. Marka xiga waa garmaweyn, marka xiga waa oday ama habar, marka xiga waa coomir xaaddu caddaatay, intaas ka dib labaduba waxay u iishaan xagga geerida waxaana ay Rabbi ku bilaabmaan baryo si dharaarihii hore wixii ay gaf galeen Alle uga dhaafo.
Magaca Ibnu Khaldun waa mid bari iyo bogax ba ka dhacay. Ragga cilmigan darsaa hal mid oo Soomaalida faaido weyn u leh aan uga soo min guurinno. In badan waxa canaan lala fuulaa ruuxii gaf ku kaca, waxa lagu tilmaamaa mid maan-gaab ah, waxa lagu sagootiyaa magac xun, waxaana laga qaadaa maamuuskii iyo milgihii uu bulshada ku dhex lahaa.
Dhinaca kale, haddii la yidhaahdo indheer-garad ayaad tahay, maan-dheeri ayaa Alle kugu mannaystay ugu danbayn waxa laga fishaaba waa sida lagu tilmaamay. Tijaabooyin badan oo ay sameeyeen aqoonyahannada falsafadda, cilmi-nafsiga iyo dabcan cilmigan bulshada waxa ay ogaadeen sugnaanshaha hawraartaas.
Dardargelinta cilmigan ee reer Yurub wuxuu bilaabmay qarnigii 19aad. Qeybta : Cilmiga bulshada. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Muuqaalka Akhri Wax ka badal Wax ka badal xogta Fiiri taariikhda.
Qalabka Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la'xiriira Soo geli fayl Bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Boggaan soo xigo shay. In other projects Wikimedia Commons. Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Febraayo , marka ee eheed Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta.